URamaphosa useyazidayisa izitolo zakwa-McDonald’s | News24
LAST UPDATED: 2018-06-19, 13:53
URamaphosa useyazidayisa izitolo zakwa-McDonald’s
Cape Town – Isiqumama sikasomabhizinisi wakuleli esiphinde sibe yiSekela Mengemeli, uCyril Ramaphosa, useyaludayisa uxhaxha lwezitolo zakhe ezidayisa ukudla okusheshayo, nezidume umhlaba wonke, uMcDonald’s.
U-McDonald’s South Africa ukuqinisekisile ukuthi uhlelo lokuvala isikhala sikaRamaphosa njengomnikazi wemvume yokuqhuba ibhizinisi lakwa-McDonald’s eNingizimu Afrika, luyaqhubeka.
“Inkampani engase ithenge, i-MSA Holdings, okuyinkampani ezinze e-United Arab Emirates,” kusho uMcDonald’s esitatimendeni.
OLUNYE UDABA: Iqembu le-ANC alidayisi - Ramaphosa
Ngenyanga kaMashi, ngonyaka ka-2011, uRamaphosa wathola isivumelwano seminyaka engu-20 sokuqhuba ibhizinisi lezitolo zokudla ezingu-145 zakwa-McDonald’s eNingizimu Afrika.
Emva kokhetho lukazwelonke ngo-2014 uRamaphosa wamemezela ukuthi usezohoxa ekubambeni iqhaza kwinqwaba yamabhizinisi akhe angaphansi kwenkampani angumsunguli wayo, iShanduka Group ukuze kungeke kube khona ukushayisana nomsebenzi wakhe njengeSekela Mengameli.